အမေရိကန်က မြန်မာအပေါ် နဂိုအတိုင်း မပြောင်းလဲဟု တေလာဆန်ပြော | dawnmanhon
အမေရိကန်က မြန်မာအပေါ် နဂိုအတိုင်း မပြောင်းလဲဟု တေလာဆန်ပြော
အမေရိကန်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တွင် နဂိုအတိုင်း မပြောင်းလဲဘဲ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်ဇ်တေလာဆန်က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်အတူ ဒီမိုကရေစီစည်ပင်ရေးအတွက် အားချင်းလိုအပ်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေမှုများ၊ ရင်ကြားစေ့ရေး၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးနှင့် လူအခွင့်အရေး ပိုမိုအလေးထားခြင်းများအား မြန်မာနိုင်ငံက ဖော်ဆောင်ကြိုးစားလျက်ရှိမှုတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံက ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် ရေရှည်ရပ်တည်ချက်အား ဆက်လက်ကိုင်စွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်ဇ်တေလာဆန်က ပြောသည်။
"မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ပြောင်းလဲဖော်ဆောင်မှုမှာ ကျွန်တော်တို့ နဂိုအတိုင်း ရပ်တည်ထားတုန်းပါပဲ။ ကြွယ်ဝပြီး လှပတဲ့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ စည်ပင်ဝပြောမှု ဆောင်ကြဉ်းလာနိုင်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ထားတယ်။" ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်ဇ်တေလာဆန်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson တို့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် အမေရိကန်သံရုံးဖေ့ဘွတ်ခ်မှတဆင့် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသော အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Rex Tillerson သည် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် လည်း ယနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးများ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
dawnmanhon: အမေရိကန်က မြန်မာအပေါ် နဂိုအတိုင်း မပြောင်းလဲဟု တေလာဆန်ပြော